सबै विदेश जानेको श्रमती यस्तो भइदिए ! २ मिनेट निकालेर अवश्य पढ्नुहोला . - Valley Khabar
Homeमनोरन्जनसबै विदेश जानेको श्रमती यस्तो भइदिए ! २ मिनेट निकालेर अवश्य पढ्नुहोला .
सबै विदेश जानेको श्रमती यस्तो भइदिए ! २ मिनेट निकालेर अवश्य पढ्नुहोला .
July 27, 2019 dhan kush मनोरन्जन
म अहिले २७ वर्षको भएँ। मेरो श्रीमान् साउदीमा हुनुहुन्छ। म लुगा सिलाउनेसँगै घर चलाउने काम पनि गर्छु। मेरा दुई छोरी छन्। एउटा तीन वर्षको अनि अर्को चाहि १० वर्षको। घरव्यवहार हेर्नु, बालबच्चा स्याहार्नु अनि काम गरेर आफ्नो खर्च आफैं पुर्याउन सजिलो छैन। तर पनि म श्रीमानले विदेशमा कमाएकै छन् भनेर उहाँको कमाईमा भर पर्दिन। घरको सबै कान गर्छु सिलाई पनि सिक्दै थिएँ। त्यही बेला बिहे भयो। बिहेपछि पढाइ पनि राम्रोसँग अघि बढाउन सकिँन। पढाइ र सिलाईमा भन्दा पनि बढी ध्यान घरव्यवहारमा दिनुपर्यो। केही काम पाउन गार्हो भयो। चिनेजानेको कोही थिएन। कसै न कसैले नभन्दिएसम्म कसले काम दिने। त्यसैले मेरा श्रीमान विदेश जानुपर्यो
देशमा काम गर्छुभन्दा गाह्रो छ। तर विदेश जान्छु भन्नुपर्छ पैसा दिनेदेखि भिसा खसाल्दिने पनि घरमै आइपुग्छन्। साउदी जानुभयो तर काम भनेअनुसारको परेन। सप्लाईको काम पर्यो। उहाँको कमाइ काम अनुसारकै छ। कहिले ३० हजार त कहिले ४० हजार रुपैयाँ कमाउनुहुन्छ। महिनामा एक लाख रुपैयाँ ऋण गरेर जानुभएको थियो। त्यो तिरिसक्नुभयो। अब केही बचानुपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसैले म पनि उहाँको कमाइ घरखर्चमा खर्च गर्नु नपरोस् भनेर काम गरिरहेको छु।
सिलाइको कामबाट छोरीहरुलाई खर्च गर्छु। साक्षरता कक्षामा पनि बस्छु। यो कक्षामा बस्न थालेदेखि मैले झन पैसाको महत्व बुझेको छु कहाँ, कसरी पैसा लगानी गर्ने, कसरी बचत गर्ने भन्नेकुरा पनि सिकेको छु। अब दुई जना मिलेर काम गर्ने हो।
मैले कमाएको पैसाले घर खर्च चलाउने उहाँको कमाइ बचत गरेर केही व्यापार व्यवसाय गर्न पुग्ने बचत भएपछि उहाँलाई पनि घरमै बोलाउछु। सबैकुरा बिस्ताै योजनाबद्ध रुपमा मिलाउँदै लैजान्छु।
दिनमा कतिपटक हस्तमैथुन गर्नुहुन्छ ? खुलेआम युवतीले दिए कडा जवाफ (हेर्नुस भिडियो)
३ करोड नेपालीको रगत उम्लिने भिडियो , नेपाली चेलीलाई लतार्दै लियर हिड्न थालेपछि नेपाली युवक भारतीय युवकहरु संग भिडे